“Mikaon-doha ireo dokotera mpandidy eo amin’ny Cenhosoa Soavinadriana amin’ny fomba hanalana ilay bala efa ho 5 andro ao anatin’ny lohan’ilay miaramila manamboninahitra voatifitra”, hoy ny Jeneraly Philibert Rakotonirina, mpiandraikitra ny seraseran’ny Tafika Malagasy nandritra ny tafa manokana tamin’ny mpanao gazetinay. Nandritry ny fifandonana fanintelon’ny Tafika Malagasy sy ny dahalo tany Soaloka, Distrikan’i Miandrivazo ny zoma 17 mey lasa teo iny no nahavoa an’ilay Liètna . Efa nakarina eto Antananarivo mitsabo tena tamin’ny angidimby izy. Voadio tanteraka ihany anefa ny kizo izay toby famaharan’ireo dahalo. Zary lasa fitaomana mpitandro filaminana maratra ny fitaterana ana habakabaka raha nohafarana hisorohana ny fanafihan-dahalo.